DEG DEG:-Nabadoono Caan ah oo ka badbaaday Qarax ka dhacay Muqdisho – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
DEG DEG:-Nabadoono Caan ah oo ka badbaaday Qarax ka dhacay Muqdisho
Ardaan Yare 23 January 2021
Jugta qarax xoogan ayaa Goordhow laga maqlay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir, kaasi oo ka dhacay qeyb kamid ah Degmada Shibis ee Magaalada Muqdisho, sida la xaqiijiyay.
Qaraxaas oo ahaa miino nooca dhulka lagu aaso ah ayaa waxaa lala eegtay gaari nooca Soomaalida u taqaano Qooqan oo ay saarnaayeen Nabadoon Muxudiin Xasan Afrax iyo Xuseen Caraale oo horey uga tirsanaa Baarlamaanka Soomaaliya.
Goobjoogayaal ayaa ku warramay in qaraxaas uu qbasaday gaariga xili ay marayeen Isgoyska Beexaani ee degmada Shibis, isla markaana waxaa ka dhashay khasaaro isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay 5 Askari oo ilaalo u aheyd Nabadoon Muxudiin Xasan Afrax ayaa ku geeriyooday qaraxa, halka dad kale oo shacab ahaa ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen, kuwaasi oo goobta ka agdhawaa.
Ciidamo ka tirsan kuwa Booliska dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa si deg deg ah u gaary goobta uu qaraxu ka dhacay, waxaana la xaqiijiyay inuu qaraxaas ka badbaaday Imaam Maxamed.
Goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa Ciidanka Booliska dowladda Federaalka xireen, iyagoona dadka iyo gaadiidka noocyadiisa kala duwan u diidaya inay halkaas maraan, welina ma jiro wax war ah oo kasoo baxay Laamaha amniga dowladda.
Darawal Gaari oo si bareer ah loo toogtay iyo Faah faahin laga helay
Toogasho ka dhacday Magaalada Muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyay